Miharatsy Ny Fanilikilihana Any Am-pianarana Ao California Hoy Ireo Zanaky ny Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Miharatsy Ny Fanilikilihana Any Am-pianarana Ao California Hoy Ireo Zanaky ny Mpitsoa-ponenana
Voadika ny 05 Jolay 2016 12:16 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Amira Matti sy ny anadahiny , samy avy any Guatemala, maka aina rehefa avy nilalao baolina kitra tao YALLA, fandaharam-potoana aorian'ny fampianarana ao San Diego izay mampianatra baolina kitra ny mpitsoa-ponenana sy ny mpifindra monina ary manome toro-hevitra ho an'ny akademika. Sary: Jean Guerrero
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 27 Jona 2016 ity lahatsoratr'i Jean Guerrero ity, ary navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mahatsiaro ny andro saika nangalana an-keriny ny zandriny lahy kely teo akaikin'ny tranony tao an-tanànan'ny Guatemala i Amira Matti, 11 taona. Hoy izy: “nihazakazaka nanatona anay ilay zandriko lahy kely ary nilaza hoe: ‘Misy olona mitady haka ahy'” . “Tahaka ny nahita matoatoa izy.” Mpamily iray sendra nandalo no namonjy azy tamin'ireo mpaka an-keriny.
Koa nanapa-kevitra ny fianakavian'i Amira fa tonga ny fotoana hialana tao Guatemala , izay ahitana ny firongatry ny herisetran-jiolahy, ary nitodi-doha ho any Etazonia izy ireo. Nanakana ilay fianakaviana ny manampahefana Meksikana teny an-dalana ary nandefa azy ireo tany an-toeram-pitazonana nandritra ny dimy volana mahery. Nofy ratsy izany hoy Amira .
“Tsy mahita tory ianao satria misy andiana bibikely mivezivezy manerana ilay toerana manontolo ,” hoy izy. “Toy ny andiany an'arivony eo izany.”
Nangataka fialokalofana tao San Diego ny fianakaviana rehefa tonga tany Etazonia. Nihevitra i Amira fa tapitra ny andiany sarotra tamin'ny dian'izy ireo. Nefa hitany fa tsy izay no nitranga raha vao nanomboka ny kilasy faharoa izy – sarotra ny nianatra teny anglisy, ary volana maro izy no tsy nianatra rehefa notànana tao Meksika. ” Tsy nianatra na inona na inona aho nandritra ny dimy volana lasa” hoy izy. “Tsapako donto ny saiko satria tsy nisy fantatro ny valin'ireo fanontaniana izay napetraky ny mpampianatro tamiko.”
Anisan'ireo mpitsoa-ponenana marobe nandositra ny herisetra any Amerika Afovoany ny fianakavian'i Amira izay niatrika ny fanambin'ny endrika fanavakavahana sy ny fahasarotana ara-panabeazana.
Nilaza izy fa mampijaly azy ny mpiara-mianatra aminy. “Tonga nanatona ahy ireo ankizy ary nilaza hoe :'manahoana ikala hafahafa, ‘ tsy nahafantatra na inona na inona aho satria tsy nahay na inona na inona momba ny teny anglisy tany am-piandohana, ary nieritreritra fa tsy tokony eto ny firenena hisy ahy. Tsy tsara ny fandraisana ahy teto “hoy izy.
Fa avy eo naheno ny momba ny YALLA ny fianakaviany, izay fandaharam-potoana iray aorian'ny fampianarana efa nanomboka enintaona lasa izay. Mampianatra baolina kitra ho an'ireo mpitsoa-ponenana sy ireo mpifindra monina izany, ary mampiasa ny fanatanjahan-tena ho fialamboly hahazoana tolotra akademika matotra.
Tarihin'ireo mpampianatra YALLA miaraka amin'ny rindrambaiko teny Anglisy izay manampy amin'ny famakian-teny sy fanoratana, vetivety dia nahatratra ireo mpiara-mianatra aminy i Amira . “Hazavainy aminao amin'ny teny Espaniola ilay izy rehefa tsy mahatakatra na inona na inona amin'ny teny Anglisy ianao, ary milaza aminao izy avy eo mba hamerina izany,” hoy izy nanazava.
Nahatsapa ihany izy ny farany fa misy ny toerana ho azy. Misy ireo mpianatra avy any Iraka, Sodàna, Honduras, sy avy any an-kafa ao amin'ny YALLA . Miray hina izy ireo satria samy voatery nifindra toerana avokoa.
Mianatra teny anglisy ao amin'ny fandaharam-pianaran'i YALLA ihany koa ny zandrin'i Amira lahy kely Matti (mitovy amin'ny anarany ny fanampinan'arany ), 8 taona. Nanampy azy ilay Irakiana mpitsoa-ponenana Riyam Mansoor. Mpifindra monina ny ankamaroan'ireo mpampianatra amin'ny fandaharam-pianarana, hoy i Mansoor, ary ny fifankahazoana amin'ireo mpianatra no fanalahidin'ny fahombiazana.
Manampy amin'ny fananganana fifandraisana bebe kokoa ihany koa ny lalao baolina kitra. “Tsy dia mila fomba fitenenana matetika ny lalao baolina kitra fa toy ny fiteny iray manerantany izany,” hoy izy.
Nilaza i Mark Kabban, ilay nisantatra ny fandaharam-pianarana YALLA fa manampy ny mpiasa hanana fifandraisana akaiky amin'ireo mpianatra ny lalao baolina kitra . “Afaka manara-maso amin'ny fomba madio izahay,” hoy izy. “Afaka mitaona azy ireo hifantoka bebe kokoa amin'ny fianarana izahay noho ny zava-misy hanananay amin'ny lalao baolina kitra.”
Tamin'ity taona ity, mpianatra 20 no nahazo diplaoma avy amin'ny kolejy tamin'ny fandaharam-pianarana YALLA, ary nandray vatsim-pianaran'ny kolejy faratampony 2,4 tapitrisa dolara. Nahatsikaritra anefa i Kabban fa nisy ny fiovana mialoha ny famatsiam-bola manaraka .Notazonin'ireo mpamatsy vola sasany indray ny fanohanany. Noho ny adihevitra momba ny fifindra-monina ao amin'ny fifidianana any Etazonia misy amin'izao fotoana no mety nahatonga izany raha araka ny eritreriny.
“Raha jerena ny lafiny ara-politika, dia mieritreritra aho fa noho ny fiovam-pihetsika manoloana ny vahoaka mpifindramonina, indrindra fa ny olona avy any Afovoany Atsinanana no nampisy fiantraikany teo amin'ireo tanorantsika, ” hoy i Kabban.
“Nisy ny mpamatsy vola sasany izay tsy tia ny ikarakaranay ankizy Silamo,” hoy i Kabban, izay tsy te hanonona ny anarana manokan'ny mpamatsy vola. “Rehefa hariva ny andro, tsapako ho toy ny tsy mila ny volan'izy ireo aho raha tsy te hanome vola amin'ny fahasamihafam-piavian'ny ankizy ao aminay izy ireo.”
Nilaza ihany koa i Kabban fa mitaraina noho ny fanilikilihana mihabetsaka bebe kokoa any an-tsekoly ireo mpianatra YALLA.
Hoy izy :”Nanatona anay ireo atleta nahazo vatsim-pianarana ary nilaza hoe: ‘mahatsiaro ho voahilikilika izahay'”. “Tsy mbola nandre toa izany aho tao anatin'ny enintaona nijoroanay. Ary tsy hitako izay tokony holazaina azy ireo afa-tsy ny hoe, ô ry zareo a, izay no maha isika antsika ary miray hina foana isika sy hiasa mafy hatrany ka hitazona ny maha-olona mendrika antsika indrindra araka izay vitantsika . “
Nilaza i Amira fa mahatsapa ho voakarakara izy ao amin'ny YALLA, ary efa nianatra ny fahatokisan-tena sy ny faniriany lehibe -ny te-ho mpandidy fo no zavatra tiany- na dia nilaza taminy aza ireo mpiara-mianatra aminy sasany tsy mpifindra monina fa tsy afaka ny ho mpandidy izy satria Goatemalteka .
Nilaza i Amira fa hibanjina hatrany ny tanjony izy.